लाइसेन्सकाे आवेदन अब अनलाइनबाट
काठमाडौँ, पुस १० गते । सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)का लागि अब घन्टौ सम्म लाइनमा बस्ने दिनको अन्त्य हुने भएको छ । दुई पाङ्ग्रे (मोटर साइकल र स्कुटर)को लाइसेन्सको दैनिक पाँच सयका दरले अनलाइन फारम भर्ने सुविधा सोमबारदेखि सुरु हुन लागेको हो ।
बाग्मती अञ्चल कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख तेजनारायण यादवले सोमबारदेखि एक दिनमा ५ सयले मात्र आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो । ‘अहिले दिने अनलाइन आवेदन कर्ताको लिखित र ट्रायल परीक्षा बाग्मती अञ्चल कार्यालय एकान्तकुनाले मात्रै लिने भएकाले एक दिनमा पाँच सय मात्रको आवेदन लिन्छौँ । यो प्रविधि आरम्भ भएसँगै सेवाग्राहीलाई पहिले जस्तो अब राती राती लाइनमा बस्न यातायात कार्यालय धाउनु पदैँन’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रमुख यादवले पुस महिनाको १७ गते कलंकी कार्यालय र पुस २७ गते चावहिल र भक्तपुर कार्यालयको सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । ‘यी तीन ठाँउमा कार्यालय सञ्चालन भएपछि माघ १ गतेदेखि चार स्थानबाट पाँच सयका दरले एकै दिन दुई हजार वटा अनलाइन आवेदन लिन्छौ । हामीले माघ १ गतेदेखि चारपाङ्ग्रेको समेत अनलाइन आवेदन लिने छौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘फस्ट कम फस्ट पाँच सय जनाले एक दिनमा पाँच सय जनाले मात्र अनलाइन आवेदन भर्न पाउछन् । अर्को दिनको अनलाइन फर्म राती १२ बजे पछि भर्न सकिन्छ ।’ प्रमुख यादवले भन्नुभयो । यसरी अनलाइन आवदेन फर्म एक दिनमा पाँच सयले मात्र दर्ता गर्न पाउने भएकाले अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र भर्नेको चाप धेरै भए फेरी पनि राती १२ बजे उठेर अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
कसरी गर्ने अावेदन? यहाँ क्लिक गर्नुहाेस
कसरी भर्ने अनलाइन फाराम ?
१. यातायात व्यवस्था ववभागको वेबसाइट www.dotm.gov.np मा जानुहोस्।
२. वेब साइटको होम पेजमा यातायात व्यवस्था ववभागको चिनारी मुनन रहेको ‘अनलाइन सवारी चालक अनुमनत पत्र’ को लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस।
९.आफूले दरखास्त दिन लागेको वर्ग छान्नुहोस् ( हाललाई A वा K मात्र )
११.आफूले दरखास्त दिन लागेको कार्यालय रहेको अञ्चल छान्नुहोस् । (हाललाई बागमती )
१२. सो अञ्चल कार्यालयको लाइसेन्स कार्यालय छान्नुहोस् । (हाललाई कुसुन्ती )